विदेशबाट पनि रविलाई राम्रो साथ, आइडल बन्ने सम्भावना प्रबल ! – Everest Dainik – News from Nepal
विदेशबाट पनि रविलाई राम्रो साथ, आइडल बन्ने सम्भावना प्रबल !
लोकेश धामी, काठमाडौं । ‘नेपाल आइडल सिजन २’ मा सयौं प्रतिस्पर्धीबाट ‘उत्कृष्ट पाँच’ मात्र बाँकी छन् । आइडलमा कम प्रतिस्पर्धी रहनुले अब उपाधि भिडन्त नजिकिदै छ भन्ने जनाउ दिन्छ ।
बाँकी रहेका पाँच प्रतिस्पर्धीमा उपाधि जित्न सक्ने क्षमता छ । तर आफूमा क्षमता मात्रै भएर पुग्दैन अब उपाधि जित्न त भोट चाहिन्छ । क्षमतालाई कमजोर भन्न चाहिँ पटक्कै खोजेको होइन । तर, आइडलको नियमका आधारमा चाहिँ क्षमतालाई अहिले कमजोर देखाउँछ ।
नियमले भन्छ जसले सर्वाधिक भोट पाउन सक्यो उसले नै आइडलको उपाधि हात पार्छ । यसकारण प्रतिस्पर्धी ‘नेपाल आइडल’ को उपाधि जित्नका लागि कडा मिहिनेतका साथ मैदानमा छन् ।
उनीहरु प्रस्तुती त दमदार दिइरहेकै छन्, भोटका लागि अपिल पनि त्यत्तिकै गरिरहेका छन् । अब बाँकी रहेका पाँचमध्ये कसले दोस्रो नेपाल आइडलको उपाधि जित्ला त ? खुल्दुलीको विषय बनिरहेको छ ।
रवि ओडः रविलाई स्वदेशबाट मात्र नभई विदेशबाट पनि त्यत्तिकै संख्यामा भोट आइरहेको छ । उनलाई आइडल बनाउन विदेशमा रविका साथी एवं समर्थक अहोरात्र खटिरहेका छन् । यसको उदाहरणका रुपमा सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।
छिमेकी राष्ट्र भारतबाट रविलाई अत्यधिक भोट आइरहेको छ । रोजगारीका लागि नजिकको देश भारतबाट रविलाई भोट कसरी आइरहेको छ जान्नका लागि सामाजिक सञ्जाल काफी छ ।
प्रायः सुदूरपश्चिमका अधिकांश व्यक्ति रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दछन् । रवि पनि सुदूरपश्चिमकै भएकाले भारतमा रहेका नेपालीले उनलाई धेरै भोट गरिरहेका हुन् ।
भारतसँगै मलेसिया, कतार, अमेरिकाबाट पनि रविलाई भोट आइरहेको छ । यतिमात्रै होइन रविका धेरै समर्थकले थाइल्याण्ड, हङकङ, क्यानडा, फिलिपिन्सबाट पनि भोट गरिरहेका छन् ।
विस्तृतमा भनौं जहाँजहाँ नेपालीको बसोबास छ त्यहाँबाट उनलाई भोट आइरहेको छ । कुरा सानो ठूलो संख्याको मात्र हो । रविलाई सर्वाधिक भोट दिनका लागि अधिकांश उनका समर्थकले समूह नै बनाएका छन् ।
नेपाल आइडलमा सुदूरपश्चिमबाट एक मात्र प्रतिस्पर्धी रहेका रवि वडलाई कसरी गर्ने भोट ? यो प्रश्नको जवाफबारे धेरैलाई थाह नहोला । त्यसकारण हामी जानकारी गराउँदै छौं- रबिलाई भोट दिन मोबाइलको Message Box मा गएर १० टाईप गरी ३१००९ मा पठाउनुपर्ने हुन्छ । भोटिङ बिहीबार राति ८ः३० बजेबाट खुल्ला हुने छ र शुक्रबार बिहान १२ बजेसम्म गर्न सकिने छ। विदेशमा बस्नेहरुले Rise and respect app डाउनलोड गरी उनको कोडमा गई भोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
रविलाई मात्र होइन अन्य चार प्रतिस्पर्धीलाई पनि भोट आइरहेकै छ । उनीहरुको पनि त्यत्तिकै क्षमता र समथर्क छन् । पाँचै जनाका आआफ्ना समर्थक छन् । यसकारण यो पटकको आइडलको उपाधि कोले जित्ला भन्न निकै कठिन छ । आज रविबारे मात्र लेखेका छौं । आगामी दिनमा बिक्रम बराल, अस्मिता अधिकारी, अमित बराल, सुमित पाठकबारे पनि लेख्दै जाने छौं ।